Global uye China Micromotor Industry Report, 2016-2020 - China Shandong Better Motor
Global micromotor goho kwegore pamusoro-gore nokuwedzera 4.8% akamira mabhiriyoni 17.5 inokwana zviyero muna 2015,. Nemhaka mishandirapamwe kuti modernize kuti bhizimisi uye zvokushandisa, kuti goho riri kutarisirwa kusimuka kusvika pamabhiriyoni 18.4 inokwana zviyero muna 2016 uye kuswedera mabhiriyoni 23 inokwana zviyero muna 2020.
China, nyika guru akaigadzira micromotors, anogadzirwa mabhiriyoni 12.4 inokwana zviyero muna 2015, kumusoro 6.0% kubva gore rakapera, uye nekurangarira kuti 70,9% of yose nhamba. Munyika micromotor goho akafanotaurwa kuti pedyo mabhiriyoni 17 inokwana zviyero muna 2020 panguva CAGR pamusoro kunhivi 7.0% mumwedzi 2016-2020.
Keymicromotor vagadziri mu China includeJohnson Electric, yakayangarara Holding Limited, Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd., uye Wolong Electric Group Co., Ltd. Johnson Electric, sezvo guru micromotor mugadziri muna China, inowana wepagore kwemari pamusoro bhiriyoni overUSD1, pamwe munyika musika achagoverwawo 4.3% muna 2015.
In China, micromotor anowana kushanda kwayo kunyanya chinyakare minda, akadai ekuteerera zvigadzirwa, mhuri midziyo yemagetsi, uye motokari, iyo vakaita zvinoenderana kwose 52.4% muna 2015. Sezvo chinyakare mumisika chikumbiro vachikwegura zvishoma nezvishoma zvine, chikuru vatyairi kuti micromotor kukura achange zvichiitika sectors kufanana itsva simba motokari, wearable mudziyo, robhoti, UAV, uye akangwara musha.
Information Industry: zvinyorwa pamusoro VCM China nokuda Mobile zviteshi vaiva 542kk muna 2015, kumusoro 12,9% gore pamusoro gore, achitora 45,9% zviri munyika yose, zvikurukuru rinosundwa smartphones uye piritsi hrs. With zvishoma nezvishoma saturation pamusoro misika kuti chinyakare nevatengi zvemagetsi akafanana smartphone uye piritsi PC, wearable mano achava chitsva kukura nzvimbo, mberi boosting kudiwa micromotor. The Chinese wearable mudziyo musika akafanotaurwa chokuwedzera pane wepagore kukura yevanhu vanopfuura 25%.
Automobile: Muna 2015, China kwakaita kudiwa motokari micromotor yakanga mabhiriyoni 1,02 inokwana zviyero (24.9% of yose yose, anotarisirwa kumuka mabhiriyoni 1,62 inokwana zviyero muna 2020), asingasviki 3% achibva simba motokari itsva. New simba Motokari rokutengesa vakakura pamwero mukomboni pagore 152,1% panguva 2011-2015 kuChina uye, pamwe nokutsigirwa National nemakanzuru policies, vacharamba vaine simba kukura tichimhanya pamusoro akatevera. Zvinofungidzirwa kuti kumusika kuti micromotors kuti simba motokari itsva acharamba achikwira pamusoro 40% gore panguva 2016-2020 pamwe kwokudiwa kwazvo zviumbu mamiriyoni 150 muna 2020.
Robot: 248,000 maindasitiri marobhoti uye basa marobhoti mamiriyoni 6,41 vakatengeswa munyika yose muna 2015, kumusoro 8.3% uye 35.7% kubva gore yapfuura, ukuwo, pamwe chete kutanga kudiwa vanenge mamiriyoni 66,6 micromotors (anoona vezvikwata vanopfuura mamiriyoni 300 muna 2020) . Muna 2015, China chakaita kuti 22.9% of munyika maindasitiri robhoti rokutengesa uye chete anenge 5.0% basa robhoti Sales, zvichiratidza nzvimbo yakakura kuti kukura.
UAV Consumer wegiredhi: Muna 2015, munyika yose nevatengi wegiredhi UAV rokutengesa vakapfuura 200,000 zviyero, tichienzanisa chete asingasviki 20,000 inokwana zviyero mu China. Yakaderera dzemakomo airspace iri zvishoma nezvishoma akasvinudzwa, wokuChina UAV pamusika huchaunza nguva nokukurumidza pamwero vanopfuura 50%.
Mukuwedzera, mumisika idzva 3D yokudhinda, akangwara musha, zvokurapa zvokushandisa, uye kushandisa michina rabhoritari zvinotsigirwa policies ndichakubvunzaiwo kutambira kupinda mukuru giya, mberi paakadzinga kudiwa micromotors.
Global uye China Micromotor Industry Report, 2016-2020 inosimbisa Followings:
Global micromotor indasitiri (kukura nhoroondo, musika saizi, musika mamiriro, yemakwikwi landscape, etc.);
Micromotor indasitiri mu China (Nezvagara Zviripo, musika saizi, musika mamiriro, yemakwikwi landscape, kupinzwa & kunze kwenyika, etc.);
Main nechokumusoro kwerwizi maindasitiri (rinobva zvinhu, kubereka, etc.), inosanganisira musika saizi, musika mamiriro, budiriro yokurera, etc .;
Nechezasi maindasitiri (ruzivo, motokari, imba mudziyo, robhoti, UAV, 3D kudhinda, akangwara musha, zvokurapa midziyo, nezvimwewo), chokuita kushanda uye musika;
11 Global uye 10 Chinese micromotor vagadziri (oparesheni, micromotor mabhizimisi, budiriro iri China, etc.).
Post nguva: Feb-27-2018